Indlela yokunamathisela isikhumba emisipha | Amadoda anesitayela
U-Alicia tomero | 28/05/2022 10:28 | Ukunakekelwa komuntu siqu, Kufanelekile, Ukufaneleka, Ukudla okunomsoco, Ezempilo
Izidlo eziningi ziqala ngonyawo lwesokudla futhi imiphumela igcina igculisa kakhulu. Kodwa-ke, uma ukulahlekelwa kwesisindo kuye kwashiwo kakhulu, kungenzeka umzimba awulitholi ifomu ebesingathanda. Isikhumba singalenga emzimbeni ngoba asincishisiwe futhi kulesi sihloko sizokwazi ukunikeza izeluleko mayelana indlela yokunamathisela isikhumba emsipha.
isikhumba esixegayo kwenzeka ngemva kokuncipha okukhulu, lapho kwenzeka khona ukuthi kunesikhumba esidlulele. Ukuqeda lokhu kwehla akuwona umsebenzi olula futhi kudinga izindlela eziqondile nokuzinikela okukhulu. Leli qiniso lenzeka ekudleni lapho bebanzima kakhulu noma ngesikhathi sokukhulelwa. Ezimweni eziningi njalo Kuye kwanconywa ukuba ulahlekelwe isisindo kancane kancane hhayi ngokuzumayo, ukuze umzimba nesikhumba kufane nokuma kwazo ngokwemvelo.
1 Indlela yokunamathisela isikhumba emisipha, noma ugweme isikhumba esiningi
1.1 Qala ngokudla okunempilo
1.2 Zivocavoce ukuze wenze ithoni
1.3 Amakhilimu okuqinisa isikhumba
1.4 I-collagen eyenziwe nge-Hydrolyzed ye-flaccidity
Indlela yokunamathisela isikhumba emisipha, noma ugweme isikhumba esiningi
Kujwayelekile ukuthi kulezi zimo isikhumba asinaso isikhathi sokubuyisela isimo saso futhi badinga isikhathi sokuzivumelanisa nesimo esisha, kodwa ezimweni eziningi isikhumba esilengayo siye sahlala lapho futhi singahlala sifakwe kuze kube phakade.
Akukapheli, akukhona konke okwenzeka kuwo wonke umuntu, ngakho-ke ukususa isikhumba esintekenteke Akunakwenzeka, kodwa akulula futhi.
Qala ngokudla okunempilo
I-Los imisoco yokudla kuzoba umthombo omkhulu wokusiza buyisa ukuqina nokuqina kwesikhumba. Ukudla okungcono kakhulu yilokho okunakho isisekelo esihle se-collagen ne-elastin; singayithola ku-izaqathe, i-salmon, ama-walnuts, i-arugula, i-kale, i-tofu kanye nobhontshisi wesoya.
Okunye ukudla okumele kwengezwe yilokho okuqukethe i-vitamin C futhi singayithola ezithelweni ezisawolintshi njengewolintshi nekiwi nasemifino efana ne-broccoli. I i-vitamin E Kubalulekile futhi futhi singakuthola okusanhlamvu okuphelele, ama-alimondi, amafutha kabhekilanga kanye nemifino enamaqabunga aluhlaza.
Uma usalandela ukudla okuqinile, akumele ukhohlwe ukuthi lokhu kudla kufanele kube yingxenye yokudla kwansuku zonke. Izithelo, imifino, amaprotheni kanye nemifino akufanele ingekho ekudleni. Amantongomane, izinhlanzi ezinamafutha, amafutha omnqumo kanye nokwatapheya kunempilo kakhulu ukukuthatha isigqi esihle somsoco esikhumbeni. Akuvunyelwe ngokuphelele ukuthi ungadli ukudla osekuphekiwe noma amakhekhe asezimbonini.
Zivocavoce ukuze wenze ithoni
Izivivinyo best to tone isikhumba kukhona Zivocavoce ngezisindo. Siyazi kakade ukuthi ukuphakamisa izinsimbi kungase kungabi into ethandwa yiwo wonke umuntu, kancane kancane abesifazane abangafuni ukubukeka benemisipha kakhulu. Nokho, lolu hlobo lokuzivocavoca yilona olungasetshenziswa kangcono okwesikhumba esincipha.
Abantu abaningi baphendukela ku ukuzivocavoca kwe-cardio ukunciphisa umzimba. Akukubi konke, kodwa kufanele siveze ukuthi kungakwenza ulahlekelwe isisindo futhi ungatholi ithoni yemisipha. Ukuvivinya umzimba nge-aerobic Iphinde ithuthukise isimo sesikhumba futhi ikhuthaze ukujikeleza kwegazi.
Amakhilimu okuqinisa isikhumba
Ama-creams angasiza ukuthambisa isikhumba ngezinga elikhulu, kodwa awukho ukhilimu wezimanga lokho kungenza wonke umsebenzi. I okhilimu abacebile nge-aloe vera muhle kakhulu, njengoba aqukethe umphumela omkhulu wokuswakama nokuvuselela kabusha.
Amamasaji ayindlela enhle yokuthuthukisa i-toning nokunwebeka kwesikhumba. Ukusebenzisa ukhilimu okhethekile nge-massage elula nsuku zonke kungaba yisinqumo esihle. Kodwa ukwenza okungenani ukubhucungwa okunamandla okubili ngesonto kuzobe kwanele.
I-collagen eyenziwe nge-Hydrolyzed ye-flaccidity
Ukudla okugcwele ukudla okucebile nge-collagen kuhle, kodwa umnikelo we-hydrolyzed collagen uzosiza izici eziningi ezifana nokubonakala kwemibimbi esikhumbeni, ukoma kwayo, ukuxega kwezicubu zesikhumba futhi ngenxa yalokho kuzosiza isikhumba sibe nevolumu eyengeziwe.
Ukuthatha lesi sengezo Kuzosiza ukukhuthaza ukukhiqizwa kwe-elastin ne-fibrillin. Lokhu kuyisihluthulelo saleso sikhumba esishwabene ngaphandle kwe-elasticity, njengoba kuzosiza ngisho nokwandisa amanzi.
Ezimweni ezimbi kakhulu futhi lapho lezi zindlela zilula, kungcono ukuphendukela esikhungweni lapho bangasebenzisa khona indlela efana la electrostimulation. Le nqubo isiza i-flaccidity, ikakhulukazi esiswini, ezinqeni, emathangeni nasezingalweni.
Amamasaji e-LPG nazo zinhle kakhulu. Kuhlanganisa ukuxova izicubu ngomshini okukhulula amafutha angazweli futhi kusize ukuqinisa isikhumba. Ukwelashwa kwakhe okomuntu siqu futhi kunemiphumela emihle.
Njengesiphetho sokugcina, kufanele siqokomise amaphuzu ambalwa abalulekile ukuze sigcine leso sikhumba sinempilo lapho senza ukudla okuqinile kwesisindo. Kufanele phuza amanzi amaningi futhi andise amaprotheni ukuqinisa imisipha ekusebenzeni kwansuku zonke.
Kungcono ukwenza Zivocavoce ngezisindo iphimbo kanye nokufaka ekudleni ukudla okucebile ku-collagen ne-elastin. Ukuzivocavoca kwansuku zonke ukushisa ama-calorie kuhle, kodwa uma ufuna izeluleko ezithile ngaphandle kwesisindo, ungazijwayeza intambo imizuzu engu-15 nsuku zonke.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Indlela yokunamathisela isikhumba emisipha